Milk powder – Thet Nandar
June 18, 2009 Thet Nandar	Brother & Sister, Food & Drink, My baby care
8 thoughts on “Milk powder”
အိမ်ကသားကိုတော့ mamail gold တိုက်တယ်။
June one သားက တစ်နှစ်အရွှယ်ကို ၂၄ ပေါင်ရှိတော့ ထွားတာပေါ့။ Pedia Sure က အစာ မစားတဲ့ ကလေးတွေကို တိုက်တဲ့ နို့မှုန့်ပါ။
သမီးက PII ရောက်နေပြီဆိုတော့ Class Teacher က ဘယ်သူလဲ မမရေ။ အိအသိဆရာမများ ဖြစ်နေမလားလို့ပါ။ အိလည်း အရင် က I.L.B.C မှာလုပ်ခဲ့တယ်။
Tr. ဖြူအိခိုင် ပါ။ သမီးတို့ အားလုံးကတော့ တီချယ် ငယ်ငယ်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ P2 အခန်းပါ။
I.L.B.C က တီချယ်အိ မင်္ဂလာပါ။
စင်ကာပူမှာ Angel တီချယ်တွေထဲကဆို တီချယ် Jade လည်း မိသားစုလိုက် စင်ကာပူ ရောက်နေတယ်။
တီချယ် Jade နဲ့က Pre school (2007) မှာ သင်ခဲ့တဲ့ ဆရာမပါ။
Tr အသစ်ထဲက ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ အိနာမည်ကို မရင်းနှီးဘူး။ အိက ကျိုက္ကဆံဘက်က ဆိုတော့ Pre School ဘက်ကို လူတွေသာ မြင်ဖူးမယ် နာမည်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် Pre School Head Tr. Irine လည်း ဒီကို မကြာခဏ အလည်လာတယ်။ Tr. Swe လည်း ဒီမှာ မိသားစုလိုက်ပဲ ရောက်နေတယ်။ အိကတော့ ဆရာမအလုပ်ကို ရပ်နားပြီး စာရင်းကိုင်ဖြစ်နေတယ် မသက်ရေ။ P2 မှာ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိသေးတယ် သမီးကို သွားကြည့်ခိုင်းဦးမယ်။ အခုကျောင်းက တနေကုန်ကျောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေက အခု P4 သင်နေကြတယ်။
Tr. Jade က နိုင်ငံခြားသူပါ။ ကြည့်ချင်ရင် ဓာတ်ပုံ တင်ပေးမယ်လေ။ ILBC က ဆရာမတွေ မြနန္ဒာ သီချင်းနဲ့ ကနေတဲ့ ပုံတွေ 😛 (အခု ရက်ပိုင်းတော့ ၀က်တုပ်ကွေးကို ကြောက်ကြလို့တဲ့ ကျောင်းရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်လောက်က မျက်နှာဖုံးလေးတွေနဲ့) စာရင်းကိုင် အလုပ်လည်း အေးချမ်းတာပါပဲ။
i found Abbott nutrition is the best in Singapore as my experience but at myanmar, it is more expensive than here.
10Q4yr share. 🙂